Betty's Page - Myanmar Network
သင်၏စီးပွားရေးနယ်ပယ်တွင် ဆက်ဆံပြောဆိုမှုဆိုင်ရာစွမ်းရည်သည် မည်မျှထိရောက်မှုရှိပါသနည်း
Started this discussion. Last reply by Zar ni myint May 14, 2016.2Replies 8 Likes
စီးပွားရေးပညာရှင်တိုင်းနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တိုင်းသည် မိမိတို့သည် ကျွမ်းကျင်သော ဆက်ဆံပြောဆိုသူများဖြစ်ကြသည် ဟု ယုံကြည်ကြသည်သာ ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် တကယ်ဟုတ်၊ မဟုတ် သူတို့ မည်သို့သိနိုင်မည်နည်း။…Continue
Started May 3, 20160Replies6Likes
ကျွန်ုပ်တာဝန်ယူရသော စာရေးနည်းသင်တန်းတွင်သင်တန်းလာတက်သူများက သူတို့သည် လုပ်ငန်းခွင်တွင် သဘောပေါက်နားလည် နိုင်စေရန် သင့်တော်မှန်ကန်သော အသုံးများကို သုံးလိုသည်- ဟု ကျွန်ုပ်အား မကြာခဏ ပြောကြပါသည်။…Continue
အင်္ဂလိပ်စာသင်ယူသူများ၏ အဓိကပြဿနာများအကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း
Started Apr 1, 20160Replies 21 Likes
အင်္ဂလိပ်စာသင်ယူသူများအတွက် အကြီးမားဆုံးသော ပြဿနာမှာ အင်္ဂလိပ်စာမှာ တိုးတက်မှုသိပ်မရှိသေးဘဲနှင့် (သို့) အင်္ဂလိပ်စကား ကို သွက်သွက်လက်လက်နဲ့ လွယ်ကူစွာ ပြောနိုင်အောင် မကြိုးစားပါဘဲနှင့် အင်္ဂလိပ်စာကို…Continue
Paying my dues (ဆပ်စရာရှိတာကို ဆပ်ခြင်း) ဟူသော စကားစု၏ အဓိပ္ပာယ်က ဘာပါလဲ?
Started this discussion. Last reply by htaylim Mar 8, 2016. 1 Reply5Likes
Paying your dues (in life) သည် အင်္ဂလိပ်ဓလေ့သုံး စကားဖြစ်ပါတယ်။ အခြေခံအားဖြင့် အဓိပ္ပာယ်ကတော့ နောင်တစ်ချိန်တွင် မိမိအလိုရှိသော တစ်စုံတစ်ရာကို ရရှိနိုင်ရန် ယခုအခါမှာ မနှစ်မြို့သော်လည်း (တာဝန်အရ (သို့)…Continue
At 12:47 on January 13, 2016, Ko Ko Lwin said…
At 23:21 on January 2, 2016, Aei Mon Kyaw said…
Thanksalot for ur sharing
At 17:18 on June 1, 2015, Richard Phyo said…
Hello! Could you please join our group and share about education knowledge for Myanmar parents. Thanks! www.facbook.com/eduknowledgemyanmar
At 16:23 on February 13, 2015, Khoon Hset Nay said…
Thanks for your useful forums!!!
I read and noted!!